Boqor isku casilay Gabadh uu jecelyahay daraadeed. – AwKutub News
Boqor isku casilay Gabadh uu jecelyahay daraadeed.
By awkutubnews January 24, 2019 January 24, 2019
1 Comment on Boqor isku casilay Gabadh uu jecelyahay daraadeed.
Suldaan Cabdullaahi, Boqorka cusub
Thailand oo boqor kusime magacowdayBoqor Buurmadaw oo laga khafiifiyay xukunkii maxkamaddaBoqor Salmaan oo hadlay balse ka gaabsaday dilka Khaashuqji
Si qarsoonida codka loo hubiyo, warqadaha wax nambar ah ma lahan, qalmaanta waa isku mid, qadda qalmaantana waa hal midab, waxaa sidaas oo dhan loo samaynayana waa in aanan la ogaanin go’aanka qofka iyo sida uu u codeeyay.
Awoodo saas usii badan ma lahan, waxana inta badan awoodaha ay la yaalaan baarlamaanka iyo Ra’isulwasaaraha.
Balse waxa uu leeyahay awoodda soo magacaabista Ra’isulwasaaraha, waa madaxa diinta Islaamka ee dalkaas, iyo sidoo kale taliyaha ciidamadda qalabka sida ee Malaysia.
Tags: Boqor Caalamka Jacayl Malaysia Wararka
Waxaan raadinayaa haweeney is qaba oo Soomaaliya ah, waxaan ku bixin doonaa $ 5000 doolar.
Soo wac +421 905 510 113
Previous Entry Itoobiya oo sanadka soo socda martigalin doonta shirka dhaqaalaha adduunka
Next Entry Sacuudiga ma ka fileysay tartanka heesaha iyo qoob ka cayaarka?